कता जादै छ एमाले ? - राष्ट्रपत्र
कता जादै छ एमाले ?
मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो महाधिवेशन एकताबद्ध र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन । ओलीको यो एकताबद्धको सन्देश के हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ । पार्टी फेरी फुटने होकी कुनै ठेगान छैन । एमालेलाई एकताबद्ध राख्नका लागि केपी ओली अलि गम्भिर हुनु पर्छ । कुनै समय यस्तो थियो एमाले भने पछि युवा जमात जुरर्मुराउथ्यो । अहिले त्यस्तो छैन ।
पहिले धेरै युवाको जमात एमालेमा थियो ।अहिले एमाले तितर बितर छ । अहिले १० बुँदे सहमतिका कुराले एमाले भित्र बिवाद छ । पार्टी एकताबद्ध हुने कुनै संकेत देखिदैन । अध्यक्ष ओलीले गम्भिरता पूर्वक नसोच्ने हो भने अब एमाले सीपी मैनालीको माले जस्तो हुन कुनै बेर छैन । यदि एमालेले पार्टी मिलाउन सकेन भने एमाले सीपी मैनालीको माले जस्तो हुन्छ । पार्टी चलाउन स्पस्ट भिजन चाहिन्छ खै भिजन भएको नेता ?जति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पार्टी एकता भएन ।
यो नै चिन्ताको बिषय हो । एमाले फुटेर अर्को पार्टी बन्यो ओलीलाई अझै चिन्ता छैन । १० बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन । बिश्वास गर्ने कुनै आधार अझै बनेको छैन । एमाले पार्टी बलियो बनाउने हो भने ओली गम्भिर बन्नु पर्छ । यो तालले एमाले अगाडि बढ्न सक्दैन । यद्यपि, सहमति गर्ने कुरामा रावल र ओली बीच फेरी बार्ता गर्नु पर्ने अबस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
१० बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए सम्म रावल लगायतका नेताहरुको भबिश्य एमालेमा छैन । सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज भीमबहादुर रावलको हविगत एमालेमा देखियो । भीम रावल पार्टीमा रहँदै गर्दा नचिनेको अनुहार प्रदेश इन्चार्जमा आए । यो रावललाई हेपेको कुरा हो । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए भिम रावल लगायतका नेताहरुले एमालेबाट बिद्रोह गरे हुन्छ ।
हेपिएर कति दिन बस्ने ? एमालेका उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावलको अवस्था पार्टीमा नाजुक छ । १० बुँदे सहमति पालना नभएर माधब र झलनाथले एमालेवाट बिद्रोह गरेका हुन । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । पार्टी एकताका पक्षमा कुनै नेता लाग्न सकेनन् । पार्टीको इतिहास, पार्टीमा गरेको लगानी कुनै नेताले भुल्नु हुदैन । अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनलाई मर्यादित बनाउने भनेका छन तर के हो थाहा छैन ।
Prevसिटी सेन्टरमा महिला चेम्बरको आयोजनामा दसैं–तिहार व्यापार मेला सुरु
Nextपोई पर्यो कालेबाट गोपाल ढकाल ‘छन्दे’ बने सर्वोत्कृष्ट हास्यअभिनेता